Warbixin Xiiso Badan Oo Daaha Ka Rogtay Seddaxda Shirkadood Ee Dunnida Ugu Shaqaalaha Badan | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Warbixin Xiiso Badan Oo Daaha Ka Rogtay Seddaxda Shirkadood Ee Dunnida Ugu Shaqaalaha Badan
Hargeysa (Hubaal) – Qormadan Kooban waxa aan ku eegi doonaa Saddexda shirkadood ee ugu shaqaalaha badan Dunida shaqaalahooduna ay ugu qanisan yihiin dhammaan shaqaalaha kale ee caalamka, marka laga hadlayo daryeelkooda iyo mushaharooyinka iyo gunnooyinka ay qaataan. Saddexdaa Shirkadood waxa ay kala yihiin: 1-Shirkada Walmart
Waa shirkadda ugu horeysa oo ah shirkad iibka qaabilsan waxaana ka shaqeeya 2.1milion oo shaqaale ah waxayna dakhli ahaan siisaa Qofkii shaqaale ahba $166,500$ waxayna ka faa’iidaysaa shaqsigiiba %7,100 waana shirkadda ugu iibka badan caalamka iyadoo 28 dal ku leh 9600 oo xarun ganacsiyeed. Shirkadan Walmart waxaa la aas aasay 1962kii waxaana aasaasay nin ganacsade ah oo la odhan jiray Sam Wolton waxaana qoyskiisu ay kamid noqdeen qoysaska dunida ugu qanisan. Shirkaddani waxa ay awood u leedahay inay soo xareyso kharash fara badan isla markaana ay faa’iido u keento mid kasta oo shaqaalaheeda ka mid ah. Shaqaalaha ugu faraha badan ee shirkadan waxa ay ka shaqeeyaan dalka Maraykanka waana shirkadda ugu shaqaalaha badan dalalka Canada iyo Mexico. Baadhitaano ay sameeyeen Cilmi-baadhayaal ayaa lagu xaqiijiyey in shirkaddan Walmart ay kasoo horjeedo midawga shaqaalaha, waxaanay shaqaalaheedu sanadkiiba cel celis ahaan u qaataan lacag u dhaxeysa 10$ ila 12$ saacaddiiba Ganacsatada qaar ayaa ku dhaleeceeya in xarumaha faraha badan ee shirkaddan ay wax u dhimi karto ganacsatada kale.